Akụkọ - Uru nke ụlọ nchara na-acha ọkụ
Enwere ezigbo ihe kpatara eji eme ụlọ ọkụ nchara nchara ọkụ, gụnyere ụlọ na ụlọ ndị nwere ọtụtụ ụlọ na ọtụtụ ụlọ, na-etolite n'ike n'ike. E jiri ya tụnyere ụdị ụlọ ndị ọzọ eji arụ ụlọ, ụlọ ọrụ TUOOU na-arụ ọrụ ọkụ, ọkachasị ụlọ keel na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie nwere uru pụrụ iche:
(1) ìhè nchara ụlọ villa, ike dị elu, arụmọrụ ọma dị egwu, nchekwa dị elu. Itselflọ ahụ n’onwe ya dị oke ọkụ, ọ bụ naanị ihe dịka ọkara ka ịdị arọ nke ihe owuwu.
(2) ọkụ nchara keel usoro akụrụngwa na ngwa mmepụta nke ụlọ ọrụ na n'ibu, elu ogo nke azụmahịa, mfe iji nweta ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nwere ike ebelata ewu okirikiri
(3) Akụkụ mpaghara nke akụrụngwa dị obere, nke nwere ike ime ka mpaghara ahụ dị irè nke ụlọ ahụ karịa 8% ma e jiri ya tụnyere ihe owuwu. Elu ụlọ na-agbakwunye ụdị ihe eji eme ka ígwè, nke nwere ike iwulite ụdị ụlọ dị oke ọnụ ma nwee ọtụtụ akụkụ, ọmarịcha mma, ma zute ihe ahaziri nke ụlọ ahụ.
(4) Enwere ike ili mmiri n'ime mmiri na paịpụ eletriki n'ime ụlọ na mgbidi ahụ, jiri usoro mgbanwe na mgbanwe dị mfe. O kwesịrị ekwesị ka ịmụta gburugburu ebe obibi nchebe na ume na-azọpụta mgbidi osisi, n'ala slab na ụlọ panel na elu technology ọdịnaya, na nwere ezi ume ịzọpụta mmetụta.
(5) Igwe igwe na-ewu ụlọ na-adị obere, obere ihe mkpofu, ihe eji eme ihe bụ ihe eji emegharị emegharị ma ọ bụ ihe ndị nwere ike ibibi, na-enye aka na gburugburu ebe obibi gburugburu ebe obibi, na usoro nke ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mmepe na-adigide, bụ nke ụlọ nchebe gburugburu ebe obibi.
(6) Tụnyere nkịtị brik ihe Ọdịdị, ngụkọta ike oriri nke ìhè ígwè Ọdịdị bụ 30% na carbon dioxide emission na-ebelata site 67%.
Dabere na nsonaazụ nke ngwa bara uru, ụgwọ ihe owuwu nke igwe eji agba igwe na ala ala ọma jijiji na ntọala ala dị nro dị ntakịrị ma ọ bụ hà karịa nke usoro ihe eji eme ka ọ dị ike, nke nwere asọmpi siri ike. N'ịtụle iji oge dị ogologo, mmepe mmepe na ihe ndị a chọrọ maka gburugburu ebe obibi, ụlọ nchara nchara nwere ezigbo mmepe mmepe na nnukwu ọchịchọ ahịa, nke ga-eji nke nta nke nta bụrụ "ebe ire ere" ọhụrụ na ahịa ụlọ. Agbanyeghị na ejighi eji ụlọ eji eme ihe eji eme ụlọ na China, anyị kwenyere na n'oge na-adịghị anya, obodo ndị na-acha ọkụ ọkụ ga-agba ebe niile na China.